Ebee ka emere Cycle Onye Ọrụ? - Bgba Ígwè
Isi > Bgba Ígwè > Ọrụ igwe - otu esi eme
Cheta na ịnwe igwe kwụ otu ebe bụ ihe amamihe ma ọ bụrụ na ndị ọkachamara ị nwere mgbagwoju anya ga-ezukọta igwe kwụ otu ebe maka gị, ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya ileba anya na akwụkwọ ntuziaka nke onye nwe ya maka nchekwa na ndozi yana m ga-agagharị ọsịsọ. Kwụsị edemede mgbe ọ bụla ị ga - eme iji hụ na e mere mgbakọ kwesịrị ekwesị. Ka anyị bido site na ijikọta fenda ahụ n'ihu ndụdụ, a na-eme nke a site na ịmịcha akụ na ndụdụ ihu na naanị ịtinye nkedo ahụ site na nkwado ahụ na fenda ahụ na ịgbatị ihe ahụ.
Nke a ị kwesịrị inwe n'oge a, nzọụkwụ ọzọ bụ itinye mgbakwunye ndụdụ ihu na wiil gị. Iji mee nke a, anyị kwesịrị iji axle arịọnụ ikpe nke nwere axle maka washers na akụ na-ejigide mkpachị mbụ chọta a obere ezigbo mma eri na otu ọgwụgwụ nut nextslide na abụọ washers slide wee slide dum axle site fenda jidesie nextslide on anyị na-akpachara anya clip n'elu inwardly eduzi axle.Next push a axle site wheel ehiwe na-eme ka n'aka na ndụdụ na nsọtụ abụọ nke axle-anọdụ n'akụkụ nke ọzọ nke wheel Cheta na ọ dị ezigbo mkpa iji hụ na retaining mkpachị na- ke nnennen itie.
Jidesie mkpụrụ osisi abụọ ahụ aka ike n'oge a ma ọ bụrụ na igwe kwụ otu ebe nwere igwe eji agbaji agbaji Ihe a gosipụtara ebe a na-asọ asọ ides kwesịrị iji S Sie ike ịghasa nke ọma nzọụkwụ ọzọ bụ itinye mgbakwunye ndụdụ ihu na wiil ahụ na etiti igwe buru ụzọ kpoo bọọlụ ndị na-agba n'elu elu shei ihu nke ihu ihu ndụdụ ụgbọ elu ahụ site na oghere dị n'ime ebe ahụ ka bọọlụ biya biya na-eche ihu na sheiisi isi site n'elu Nke ọzọ, gbanye etiti ahụ otu agba agba niile gbadata, sotere wedge, onye na-eme ihe mgbe niile, ihe na-atụgharị uche na-ejide n'aka na ihe nkwado ahụ na-eche ihu na n'ikpeazụ ka a ga-eme ka mkpọchi ahụ dị elu, nke a bụ ihe ị kwesịrị n'oge a bụ nzukọ aka na-esote Loosen the handlebar stem screw at elu ma dọdaa azuokokoosisi site na mkpịsị nke elu nke isi aka mgbe ọ ruru ogo achọrọ. Kedogide otu ịghasa iji hụ na azuokokoosisi mụ na kwuru kpọmkwem elu. Hụkwa na ihe nkedo ahụ na-atụgharị na wiil ahụ na-atọpụ ihe nkedo ahụ ma na-agbanye aka na ya n'akụkụ achọrọ mgbe nkwonkwo ụkwụ ahụ na-eme ka ihe nkedo ahụ sie ike na-esote slide na mpempe aka na njedebe ọ bụla nke njikwa ahụ ma ọ bụrụ na igwe kwụ otu ebe gị nwere n'ihu otu Ọ bụrụ na ejiri aka gị rụọ ihe ga - eme ka ị nwee ike ijigide ngwa ọgụ ma ọ bụ ụzọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ abụọ, ejiri breeki breeki na lever griva n'otu ụzọ ahụ na sistemụ braket egosiri ebe a na saunakick, wee tọghee mkpụrụ ahụ na ihe nkwado ahụ. ruo mgbe ọ tọhapụrụ nnọọ.
Debe ihe nkwado a n'ime ọdịiche dị n'azụ crank ma jide n'aka na nkwụnye ahụ na-apụta ma mee ka pedal ahụ sie ike nke ọma. Wụnye pedals na-esote pedal ọ bụla ejiri L ma ọ bụ gosipụta otu akụkụ nke igwe kwụ otu ebe ha bụ nke elu n'akụkụ aka nri na akụkụ dị n'akụkụ nke ogwe aka ahụ L na-adaba n'akụkụ nke ọzọ ma na-emegide ya na mgbatị na mgbatị na ala ka ọ na-etinye oche oche n'ime ala nke clip ma chọta akụkụ ị chọrọ ịgbakwunye nut a nke ọma iji hụ na oche anaghị ighikota, slide oche post n'ime mwekota na igwe kwụ otu ebe na-edebe ya na chọrọ elu ikesiike mwekota aku nnọọ uko ngosiputa mkpuchi The ikpeazụ akụkụ nke nzukọ bụ ebe ahụ na-acha ọcha ngosiputa na n'ihu nke bike mgbe red ngosiputa dị na azụ, ndị na-egosi ogologo oge na-etinye aka na mkparịta ụka nke wiil ahụ site na itinye okwu ahụ n'etiti akụ na ihe ngosi ahụ n'onwe ya, nke mezigharịrị akwụkwọ ntụziaka banyere otu esi achịkọta gị r onye oru ohuru ji ebu igwe. Hụ ntuziaka maka nlekọta na nchekwa ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ọzọ na callus na 888 300 zitere anyị ozi na okirikiri ọrụ ndị mmadụ, anyị nwere olile anya na ị dị mpako dịka anyị nọ n'otu akụ dị oke ọnụ ahịa America na usoro ọrụ aka ọrụ aka.
Ownnye nwere Oge Ọrụ?
Onye ọrụ ọrụ okirikiriejiri mpako wuru na USA site na iji akụrụngwa akụrụngwa dị na South Carolina rụpụtara. Wuru na America - Ọ BTER Ihe!
Kedu ihe igwe eji arụ ọrụ?
Wayne Sosin, onye isi oche nkeOnye ọrụ ọrụ okirikiri, na-anọdụ n'otu n'ime ụlọ ọrụ atọ a na-emepụta nke ndịụlọ ọrụ. Roberto Combay na-ese agbaigwe kwụ otu ebeokpokolo agba naOnye ọrụ ọrụ okirikiri. Ọ malitere na ngalaba taya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 20 gara aga.15 nke 2008 r.
Anyị ga- n'ụzọ ụfọdụ na-enweta anyị pedaling ike si cranks na n'azụ wheel. Chains bụ n'ụzọ doro anya ụzọ kachasị esi eme ka anyị gaa n'ihu. Ọ bụrụ na ị debanyere aha m ọwa, ị ga-ahụla na, n'echiche m, eriri dị mma maka ndị njem igwe ogologo.
E nwere ọtụtụ ụzọ kacha mma iji mee ka igwe kwụ otu ebe, gụnyere draịvụ, draịva, na eriri mbanye! N’isiokwu a, ị ga-amata ihe niile kpatara iji mee ka okporo igwe ghara ịga nke ọma n’ịgba ịnyịnya ígwè. Nọrọ na-ege ntị na njedebe ka anyị ga-eji ihe ọmụma anyị banyere draịva draịva iji tụlee ihe ọhụụ ọhụụ na-adọrọ mmasị. Ma nke mbụ, gịnị bụ igwe kwụ otu ebe? A na-ejikwa akụrụngwa akụrụngwa eme ihe na akụrụngwa na ngwa ọrụ, mana ị nwere ike ọ gaghị ama na ejirila ya na igwe igwe ihe karịrị afọ 125.
Kama iji agbụ na sprocket iji gbanwee ụkwụ azụ, ụzọ abụọ nke bevel na-ebufe ike n'azụ ụkwụ site na mkpanaka ụgbọala. A na-ebukarị usoro sistemụ dum n'ime ụlọ aluminom nke na-arụ ọrụ dị ka ezigbo nkwekọ nke usoro gị. Ndị na-emepụta igwe kwụ otu ebe na-adị ugbu a ekweghị nkwa akụkụ ọ bụla ekpughere, enweghị agbụ ma ọ bụ agbụ gbajiri agbaji, na enweghị mgbapụ na-agba ọsọ - nke ihe niile dị m mma.
Gini mere na eweghi iwepu ike ogwu ndia? Ihe kpatara # 1. Derailleurs bụ ihe pụrụ iche. O doro anya na ndị na-ere Derailleurs bụ ụgbọala kachasị mma maka ọtụtụ ngwa ịgba ígwè.
Ha dị ọnụ ala ime, nke dị fechaa, na-arụ ọrụ nke ọma, yana ihe karịrị otu narị afọ nke ọhụụ, ha na-arụ ọrụ nke ọma. A pụkwara itinye ndị na-ere ahịa na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ igwe ịnyịnya ígwè niile, ị nwere ike ibute akụkụ ndị ọzọ na-anọchi anya ma chọta onye nọ n'ọtụtụ obodo iji mezie ha. Ebe ọ bụ na enweghị ike ijikọta shaft na derailleurs, nke a bụ otu n'ime isi ihe kpatara igwe eji eme ka igwe anaghị adịkarị.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị nwere ekele iji ike iji igwe kwụ otu ebe kpuchie ogologo oge na enweghị mmezi, ma ọ bụ ikike ịnya ọnọdụ ihu igwe dị egwu na-enweghị ngbanwe ngwe, ntanye ma ọ bụ mkpa ihicha unyi site na draịva gị - ọ bụ ebe a ka usoro ntanetị na-enwu na shaft mbanye nwere ike ime na atọ na-n'ime esịtidem gia ehiwe. Ya mere, na nyocha a, anyị ga-eche na onye na-achọrịrị ịnyịnya ígwè na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ n'etiti iji eriri, eriri, na eriri. Ihe kpatara nke 2.
Mbelata ikike ịrụ ọrụ. Onye na-akwọ ụgbọ ala adịghị arụ ọrụ nke ọma karịa agbụ ma ọ bụ belt. Ọnwụ kachasị njọ nke arụmọrụ na-akpata naanị site na ịgbanwe usoro ntụgharị, otu ugboro na crank na ọzọ na azụ azụ wheel.
Anyị enweghị ọtụtụ data arụmọrụ ebe a, mana na 1983 Josef Keller jiri ụgbọala a na-akọwaghị akọwapụta ya na agbụ nwere ike ịchọta ihe dị iche na 7% na arụmọrụ draịva. Nke a dị n'agbata 50 na 200 watts nke ike ngagharị. Eziokwu esemokwu anwalela otu usoro ihe eji arụ ọrụ nke ihe dị ka 99% na 150 W yana eriri eriri yana arụmọrụ nke 98.6%.
Site na data ndị a dị ugbu a, nke a ga-apụta na mbanye ụgbọala nwere arụmọrụ gburugburu 92%. Agbanyeghị, agbụ na mmanu adịghị mma dịka ha dị taa na mbido 1980, na-eme ka akụ na-erughị 90% rụọ ọrụ nke ọma. Amaara m na ọnụọgụ ndị a anaghị ada ka nke ukwuu, mana ka anyị kwuo na onye na-agba 70kg nwere ụkwụ ịnyịnya 15kg na-ebugharị n'ugwu nwere ọkwa 5%.
Mgbe ị gbasịrị kilomita 10, ma ọ bụ ihe dị ka elekere, elekere igwe kwụ otu ebe ga-anọ nkeji anọ n’azụ igwe kwụ otu ebe. N'aka nke ọzọ, agbụ na eriri na-efunahụ arụmọrụ n'ime mmiri ịkwọ ụgbọ mmiri na apịtị. Eziokwu esemokwu achọpụtawo na agbụ bụ 94.4% na-arụ ọrụ na apịtị na mmiri mmiri na 92,8% na-arụ ọrụ na apịtị na akọrọ.
Yabụ na ọnọdụ apịtị na-akwa emo, osisi nwere ike ịpụta nke ọma na ọ ga-arụ ọrụ nke ọma karịa agbụ ma ọ bụ eriri (na-eche na ị naghị eji ihe eji agbụ). N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ: otu osisi na-arụ ọrụ nke ọma n'ọnọdụ dị mma dị ka agbụ na nnukwu apịtị. Ihe kpatara # 3.
Ihe mgbakwunye. Usoro usoro osisi na-achọkwa ihe dị arọ, nke na-eduga na ọnwụ nke otu kilogram abụọ ma e jiri ya tụnyere agbụ ma ọ bụ eriri belt. Ihe ndị a dị oke mkpa dị oke mkpa n'ihi na ndị na-ebu ụgbọ na-enweta nnukwu torque mgbe ha na-amalite site na nkwụsị.
The torque bụ a karịsịa nnukwu mgbochi na aro draịva n'ihi na ha na-eji bevel Kwadobe na a obere okirikiri. Nke a na - eduga na ike dị ukwuu na ntụgharị uche ma e jiri ya tụnyere agbụ ma ọ bụ eriri belt. Ma ọ bụ iji tinye ya na nkà na ụzụ: oge ​​ogwe aka nke ụgbọ okporo ígwè na-agba ọsọ dị ihe dị ka okpukpu anọ ma ọ bụ asatọ karịa mkpụmkpụ ma ọ bụ eriri belt.
Ọ ga-mere a ga-haziri maka a torque anọ na asatọ ugboro elu. Ike ndị a dị elu na-etinyekwa nsogbu na bebi na bevel gears, nke nwere ike ịgwụ ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ha ezughi nkọwa ziri ezi. Ọ dị mma, mana gịnị ma ọ bụrụ na ị chọghị ịma maka arụmọrụ ma ọ bụ ibu? Ihe kpatara # 4.
The gia itinye n'ọnọdụ. Ihe mgbochi ọzọ maka sistemụ okporo ụzọ bụ itinye nghazi. Iji belata nkedo na ịbawanye arụmọrụ nke ọma, enwere ụzọ kachasị mma maka meshing nke bevel gears.
Okpokoro agba ịnyịnya ígwè niile na-agbanwe n'okpuru ibu, mana ọ bụrụ na etiti anaghị ezu oke maka sistemụ shaft, ọ nwere ike ibute ọgbaghara na-ezighi ezi. Otu ihe ngwọta e mepụtara bụ iji njikọ CV na nsọtụ abụọ nke aro ahụ. Nke a ga-eme ka etiti ahụ nwee ike ịgbanwe, mana ọ ga-emekwa ka esemokwu, ibu, na mgbagwoju anya dịkwuo ukwuu.
A ga-ejikwa usoro dị elu rụọ ọrụ nke ọma iji mezuo nke ọma, na onye na-eme ihe n'azụ azụ ga-adịkwa mfe ịnweta ya mgbe ị na-etinye wiil azụ. Ntugharị gia bụ nsogbu nwere ike idozi, mana ọ na-achọ etiti kwesịrị ekwesị, nnabata ihe nrụpụta, yana ụzọ iji nweta ohere kachasị mma n'etiti bevel. Ihe kpatara # 5.
Akụ akụkụ ahụ. Na na na, ị ugbu a, nwere a super stiif etiti na a n'ezie ọma e mere na-arụpụtara aro mbanye. Ọdụ usoro na okpokolo agba ha na-ewu gburugburu.
Nke a pụtara na ọ bụrụ na ị nwere nsogbu na osisi gị ma ọ bụ ọ bụrụ na ịnọghị n'akụkụ ndị ọzọ, ị gaghị enwe ike ịgbanwe draịva gị gaa eriri ma ọ bụ agbụ. A ga-akpụgharị igwe kwụ otu ebe gị na ngwụcha ụbọchị. Tupu m kechie ya niile, ka anyị kwuo banyere Driven Technologies 'prototype shaft drive.
Nke a bụ ụdị dịtụ iche nke draịva shaft ka ọ na-ebufe ike site na ọtụtụ ụlọ katrij nke jikọtara ya na nkedo nkedo okirikiri abụọ. Ihe di egwu banyere ugbo ala ugbo ala bu na aghaghi ijiko ya na uzo uzo, ya mere na o n’enye ya ihe di oke nma n’ile obula. Ekwupụtara na 99% ma ọ bụ karịa.
N'iji ya tụnyere, ebe kachasị mma anyị nakọtara data nwere arụmọrụ nke 92 ka 97%, dabere na gia ahọrọ. Ọ bụ ezie na a na-anya ụgbọ oloko a na-agba ọsọ na velodrome ruo ihe ruru 45 km / h, enwere nnukwu nsogbu iji mee ka ụgbọ oloko a rụọ ọrụ na ụwa n'ezie. Ijikwa obere ọsọ ọsọ ga-abụ ihe ịma aka ma ọ ga-achọ ihe ndị dị elu iji nweta ike na ogologo oge nke mgbakọ mkpọ.
Ndị na-akwọ ụgbọala ga-ahụrịrị na ndị ọkwọ ụgbọala gafere ikike ibu nke obere ụlọ nkwakọba ihe. Onye isi ọkwọ ụgbọ ala kwetara n'oge na-adịbeghị anya ihe abụọ a na email na CyclingTips, na-ekwupụta na ihe anyị hụrụ ugbu a abụghị ngwaahịa ikpeazụ ma ọ nwere ntụkwasị obi na enwere ike idozi nsogbu ịma aka ndị a. Naanị natara otu nde dollar na ntinye ego na mpụga.
Ya mere, ọ ga-abụ ihe na-akpali mmasị ịhụ ma ọ bụrụ na ha emesịa nweta ụgbọ okporo ígwè a ala. Otu ihe edeturu ikpeazụ edetu gbara agba: Creatmepụta triangle azụ azụ nke siri ike iji wee mezuo nsogbu bụ isi ihe mgbochi ọzọ. Nke a megidere omume ugbu a nke mbenata nkwụsi ike nke etiti ahụ iji melite 'ịgba ịnyịnya' ma ọ bụ 'mmetụta' nke igwe gị.
Nwere ike ịmụtakwu banyere nuances nke isi ike na isiokwu m dị n'elu. Ọdụ draịva enwe ezigbo aha na ọgba tum tum ụwa. Mana n ’ụwa a, enwere ike imeri mgbakwunye na ibu ọrụ dị ala site na iji motọ dị ike karị.
N'aka nke ọzọ, ịnyịnya ígwè na-adị mma mgbe niile mgbe mbọ ị na-etinye na pedals na-akwụghachi ụgwọ site na ị na-arụ ọrụ nke ọma. Enwere m olileanya ịhụkwu ọhụụ na draịva ndị ga-eme n'ọdịnihu n'ihi na echere m na ha dị ezigbo mma. Ma, ha nwere ọtụtụ ihe mgbochi ha ga-emerịrị.
Ewezuga ibu agbakwunyere ma belata arụmọrụ arụmọrụ, ha chọrọ okpokolo agba, ihe dị elu dị ukwuu, na ntinye aka nke onye ọrụ nke bevel azụ. Chains ka bụ nhọrọ kachasị mma maka ọtụtụ mmadụ n'ihi na enwere ike ijikọ ya na ọnụ ala dị ala, dịkwa fechaa na ịrụ ọrụ nke ọma. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ịchọrọ echiche nke igbe dị ka Rohloff ma ọ bụ Pinion, enwere m ike ịkwado ngwakọta ahụ na eriri ndị dị ala na ogologo oge.
Ọ bụrụ na ihe igwe na-atọ mnya igwe na-amasị m, biko tụlee ịkwado ọwa a na Patreon. Ma ọ bụ ọzọ, jidere otu n'ime akwụkwọ m! The Touring na Bikepacking Bike Buyer's Guides na-emelite kwa afọ n'efu na-akụziri gị ihe niile ị chọrọ ịma banyere igwe kwụ otu ebe tupu ị nwee ike iji ihe karịrị 220 dị iche iche igwe kwụ otu ebe na njedebe nke akwụkwọ. Pịa ebe a iji mụtakwuo maka izipu igwe kacha mma.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ụwa eriri, pịa isiokwu a ebe a.
Kedu ihe igwe kwụ otu ebe?
Industrialgba ígwè ọrụA na-ewu ya n'ụkpụrụ siri ike iji rụọ ibu ndị dị arọ karịa karịa ndị nkịtịanyịnya igwe. Ihe niile dị na bekee ma nwee ike ijikwa ibu ruru 400 lbs. Ndị na-ahụ maka ụgbọ mmiri '26' Bruiser 3.0igwe kwụ otu ebenwere beefy 3 'Kenda All Black taya na elongated etiti.
Kedu ihe mere FBM BMX?
O di nwute, anyi emechiela igwe ahia naFBMagaghi-arụpụta iheanyịnya igwe. Nke a abụrụla mkpebi siri ike na-enweghị atụ ma anyị nyochara ọtụtụ nhọrọ iji jigide azụmaahịa dịka ọ dị na mbụ mana anyị enweghị ike ịga n'ihu na-aga n'ihu n'okpuru ụdị dị ugbu a.bọchị 2020
Thelọ ọrụ igwe anyị na-etolite?
Globalwa niileahịa igweEjiri nha USD 54.44 dị na 2020. A na-atụ anya ịgbasa na ngwongwo kwa afọutoọnụego (CAGR) nke 7.0% site na 2021 ruo 2028. Mmụba nke ọnụọgụ ndị mmadụ na-ahọrọna-agba ọsọdị ka ụdị ntụrụndụ na-atụ anya na propel nauto.
Kedu ihe kpatara igwe ịgba ọsọ 3 dị oke ọnụ?
Gị mbụ zuo nke a3-igwe kwụ otu ebeenwere ikeỌzọ, naanị n'ihi na n'ime gearing usoro na-Ọzọgbagwojuru anya nadị oke ọnụ karị. Atụmatụ ndị a dị elu na-abịa na ọtụtụ obere akụkụ, nke pụtara nrụzi ọkọlọtọ nwere ike ịlaghachi gịỌzọkarịa ị ga-akwụ ụgwọ 7-igwe kwụ otu ebe.23.08.2017
Ogbe 3 zuru ezu na igwe kwụ otu ebe?
Nhọrọ nke iji nweta a3-okwuigwe kwụ otu ebema ọ bụ 8-ọsọigwe kwụ otu ebedabere na mkpa ịnya ịnyịnya gị. Na a3-okwuigwe kwụ otu ebe, I nwere ike na-echegbu onwe na-erughị banyere mmezi mgbe ị na-enwe ihe ọma na-agba ịnyịnya. Ọ dịkwa mfe ịgbanweKwadobena a3-okwuigwe kwụ otu ebe; ị ga-enwe ike ịgbanweeKwadobema ị na-akwagharị ma ọ bụ na-akwụsị.25.10.2018
Kedu ụdị igwe ịgba okirikiri ka Workman Cycles na-eme?
ulo maka Workman Industrial B ịnyịnya ígwè, Industrial Tricycles, 3 Wheel Bicycle Trike, Adult Tricycles, Vending ụgbọ ala & nkwupụta ụda; Gwongworo, Nyefe Cycles, American mere ịnyịnya ígwè, Ibu ebu na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Kedu ụdị igwe igwe ọrụ bụ Workman bumble bee?
Mbupu n'efu. Nghaghachi ụgwọ efu. 7,000 + Branddị. Mbupu n'efu. Nghaghachi ụgwọ efu. RR # Vintage na-adịghị ahụkebe Anya! Onye oru 1970s Bumble bee? Kpakọba igwe kwụ otu ebe Workman 6911V Bicycle Seat 13 In. Extra Wide Workman 4912V Bicycle Seat 9 In. Standard ỌR WOR onye ọrụ 6911v Bicycle Seat 13 In. Extra Wide WORKSMAN 6911v Bicycle Seat 13 Na. Gburugburu
Kedu ihe kpatara Morris Worksman ji mepụta okirikiri ọrụ Workman?
Laa azụ na 1898 mgbe Morris Worksman guzobere Worksman Cycles, nkwenkwe ya bụ na usoro nwere ụkwụ atọ nwere ụkwụ nwere ike dochie ịnyịnya na ụgbọ ala ahụ site n'inye ụzọ dị ọnụ ala ma dịkwa mfe ntụkwasị obi iji bugharịa ndị mmadụ na ngwaahịa na mpaghara obodo mepere emepe. Dịka o siri pụta, nkà ihe ọmụma ya ziri ezi.